IntelliCAD CAD software. CAD zvimwe
Wms2Cad - inowirirana wms services neCAD zvirongwa
Wms2Cad chishandiso chakasarudzika chinounza WMS NE TMS masevhisi kuCAD kudhirowa kwekutaridzirwa. Izvi zvinosanganisira Google Earth uye OpenStreet mepu mepu uye nemifananidzo masevhisi. Izvo zviri nyore, zvinokurumidza uye zvinobudirira. Iwe unongosarudza mhando yemepu kubva pane yakatsanangurwa rondedzero yeWMS masevhisi kana kutsanangura imwe yaunofarira, unogona ...
AutoCAD-AutoDesk, Google pasi / mamapu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ita chigadzirwa chemagariro ezvirongwa ne CivilCAD
Mapurogiramu mashoma kwazvo anoita izvi, zvirinani nekureruka kunoitwa neCivilCAD Izvo zvatinowanzo tarisira mushumo wemapasuru, neblock, netafura yavo yemadhiri uye madaro, miganhu uye mashandisiro. Ngatione maitirwo azvo ne CivilCAD, tichishandisa AutoCAD kunyangwe ichishandawo neBricscad iyo isingadhuri uye ...
Kana usati wambonzwa nezve FastCAD ... iwe unofanirwa. Ndinoziva, unogona kuziva kwenguva yekutanga kuti chirongwa ichi chiripo, asi ini ndoda kutora chinguva kubva husiku huno hwechando kirimu nemaOreo makuki kuratidza chishandiso icho isu chatinowana chatinodzidza kubva kunyangwe chiri mundima yekupedzisira. Nei FastCAD ichikosha Zvakanaka ...
Mhoro shamwari dzangu, mapato, ma cohetillos, ma nacatamales uye kumbundirana kwegore Idzva zvakapfuura. Zvakanaka kudzoka kudivi rehupenyu, mugore rakanaka renhau. AutoCAD inouya makore matatu mushure mekushandura iyo interface kutenderedza uye ipapo zvinonzi izvi zvinogona kuve gore ...
Ndanga ndichinyora nezve yakapenga tekinoroji misoro kweanopfuura makore maviri, kazhinji software uye maapplication ayo. Nhasi ndinoda kutora mukana kuti ndiite ongororo yezvazvinoreva kutaura nezve software, netariro yekuumba pfungwa, kuratidza hunhu uye mapinduriro avanowana mari yehupfumi uye mazwi ekugadzira traffic mu ...
Blog Google Earth gvSIG Os siyana GIS
ArchiCAD, AutoCAD-AutoDesk, Cadcorp, Google pasi / mamapu, GvSIG, IntelliCAD, siyana GIS, Microstation-Bentley, Virtual Earth
Ini ndinonyatsoda Geoinformatics, kunze kwekuve magazini ine kuravira kukuru mukumisikidzwa, zvirimo zvakanaka kwazvo muzvinhu zve geospatial. Nhasi vhezheni yaApril yakaziviswa, kubva kwandakatora mamwe magwaro akaoneswa mutsvuku kukukurudzira iwe kuverenga kwakanaka. Mushanduro dzapfuura ndakaita ongororo, nhasi ini…
AutoDesk ESRI Google Earth uswa gvSIG Os Magazines siyana GIS QGIS
Geospatial - GIS, GvSIG, IntelliCAD, siyana GIS, Microstation-Bentley, My geofumadas, qgis
Sezvo paine enzaniso pakati pemakomputa mhinduro eGIS Geographic Information Systems, zvakare muWikipedia kune tafura yakafanana yezvishandiso zveCAD zvinotungamirwa kune zvatinoziva seAEC (Architecture, Injiniya uye Kuvaka) Kune vadzidzisi veyunivhesiti, kazhinji yapera basa inotaurira vadzidzi vavo kutumira Wikipedia ...
ProgeCAD, imwe nzira yeAcotCAD
ProgeCAD ndeye yakaderera-mutengo mhinduro yakanangana neIntelCAD 6.5 tekinoroji, iyo inogona kunyatso kutorwa seinotsiva AutoCAD-chikamu software. Ngatione kuti chii chinonzi progeCAD: Zvakafanana neAutoCAD Icho chokwadi chekufanana neAutoCAD zvese mumirairo nekushanda zvinoreva kuti hapana chikonzero chekudzidzisa ...
Mazuva mashoma apfuura ndanga ndafunga kuyedza kuti yakadaro yeNetbook inoshanda munzvimbo ye geomatic, mune ino kesi ndanga ndichiyedza iyo Acer One iyo vamwe vatengesi vekumaruwa vakandirayira kuti nditenge pakushanya kuguta. Muedzo wakandibatsira kusarudza kana mune yangu inotevera kutora ini ndinoisa mari mune imwe HP yepamusoro ...
Acer Aspire Bentley Systems Blog DGN gvSIG Os siyana GIS
Geospatial - GIS, IntelliCAD, siyana GIS, Microstation-Bentley
BitCAD - AutoCAD (Round 1) fananidzo
Pakutanga ini ndanga ndataura nezveBitCAD, inova nzira isingadhuri kuAutoCAD, ine kushambadza kwakanyanya uye kuti izvozvi yaburitsa vhezheni yayo 6.5 ine 3D inoshanda. Zuva rega rega mamwe makambani anomanikidzwa kusiya tsika yekubira nekuti zvibvumirano zvepasi rese zviri kuwana hurumende zhinji kuti dzibatanidzwe mu ...
Mushure mekufa kweSAICIC, zvirongwa zvakasiyana zveMexico zvakatora uyu musika, ichiita imwe yenzvimbo dzeinjiniya dzakatanga kuita michina. Ndinoyeuka kuti dzimwe nguva ndaidzidzisa kosi yemutengo, uye zvaidikanwa kuyedza akasiyana maficha (anowanikwa mumazuva iwayo), senge NewWall, Opus, Champion naNeodata. Iyo yekupedzisira yakaita kwandiri ...
Ini ndinofunga kushambadzira kweBitCAD, kubva kuIntelliCAD, kwakanaka kwazvo, uko nenzira iri nzira yakachipa kune AutoCAD sezvo ini ndanga ndichitaura nezvechinguvana chapfuura patakaita ongororo yakawandisa yechirongwa ichi. Inopa chidzidzo chakanaka kune Manifold Marketing department hehe. Uye sezvo ndichivada, ivo ...
dwg siyana GIS
Iyo Yemahara Software Foundation (FSF) yakagadzirwa muna 1985 nechinangwa chekusimudzira kushandiswa, kuvandudzwa uye kuchengetedzwa kwesoftware pasi pemarezinesi asiri epamutemo ehurongwa hwekutengesa. Via Gigabriones Ini ndadzidza kuti iyo FSF yakazivisa gumi nemana ekutanga mapurojekiti, kusanganisira maviri mune geospatial nyaya: Anotsiva Google ...
AutoCAD-AutoDesk, Geospatial - GIS, Google pasi / mamapu, IntelliCAD, Microstation-Bentley
Ini ndinowana dambudziko kubva kuna tekinoroji inoshandisa Microstation V8, ichitarisa kuverenga iyo AutoCAD faira ra2008. A bit of history Iyo dwg fomati yakatanga kushandiswa neInteract CAD, yakagadzirwa naMike Riddle muma70's, uyu aive mumwe wevakabatana ve AutoDesk iyo yakatanga neiyo yakafanana zita rekuwedzera re ...